Madaxweyne Farmaajo oo ku ammaanay ganacsatada kaalinta ay ku leeyihiin horumarka dalka (Sawiro) | Jowhar Somali News Leader
Madaxweyne Farmaajo oo ku ammaanay ganacsatada kaalinta ay ku leeyihiin horumarka dalka (Sawiro)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Bosaso ee xarunta Gobolka Bari ayaa kulamo gaar-gaar ah la yeeshay hoggaanka dhaqanka iyo Ganacsatada Gobolka.
Ganacsatada ee uu la kulmay Madaxweynuhu ayaa soo bandhigay sida ay uga go’antahay in ay kaalin mug leh ka qaataan qorsheyaasha lagu hormarinayo dalka, iyagoona xaqiijiyey in ay markasta garab taaganyihiin dowladdooda si looga gudbo waqtiyadii muragada badnaa ee soomaray shacabka Soomaaliyeed.
Intaas kaddib, Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu wehelinayo Madaxweynaha Dowlad Gobolleedka Puntland Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xarigga ka jaray dhismaha xafiisyada Shirkadda isgaarsiinta Golis oo ah dhismaha ugu dheer ee laga hirgeliyey magaalada Boosaaso. Sidoo kale waxa uu daah-furay adeegga Internetka ee xawaarehiisu sarreeyo (Fiber Optic) oo markii ugu horreysay laga hirgelinayo deegannada Puntland.
Dhanka kale, Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo waxa uu kormeeray qaybo ka mid ah suuqyada magaalada Boosaaso iyo goobaha loo nasasho tago isagoona ka soo dukaameystay goob ganacsi oo ku taalla bartamaha magaalada Boosaaso.
Madaxweyne Faramaajo oo booqasho ku jooga Boosaaso
Previous articleWasiirka cusub ee Arrimaha Gudaha oo gaaray magaalada Gaalkacyo
Next articleMidowga Africa oo Trump ka dalbaday inuu ka laabto hadal gaf ku ah Africa